ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှင့်လူတစ် ဦး လှူဒါန်းခြင်းအတွက်ပါ ၀ င်သည့်အသင်းသို့ဆက်သွယ်ပါ
ငါတို့အသိုင်းအဝိုင်းကိုထောက်ပံ့ပြီးသူတစ်ပါးကိုကူညီကြပါစို့။ Hodges တက္ကသိုလ်သည်ဆင်းရဲသောမိသားစုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးစားသောသူငယ်ချင်းများအတွက်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းရန် Harry Chapin Food Bank နှင့် Brooke's Legacy Animal Rescue တို့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ၂၀၂၀၊ ဇွန် ၁ ရက်မှဇွန် ၁၅ ရက်အထိလှူဒါန်းပါ။
သင်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားစေနိုင်သည်!
သင်၏လှူဒါန်းမှုများကိုတည်ရှိပြီး Building U ၏ lob ည့်ခန်း၌ပယ်ချလိုက်ပါ 4501 ကိုလိုနီ Blvd. , Ft ။ Myers, FL 33966 ။
Harry Chapin Food Bank အတွက်လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ
သစ်သီး (ခွက်များ၊ စည်သွတ်၊ သွေ့ခြောက်)
Macaroni & ဒိန်ခဲ (boxed)
ချက်ချင်း mashed အာလူး
ခွေးလှေး / လစဉ်ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ
အမှိုက်အိတ် (၁၃ ဂါလံ)
Clorox / Lysol သုတ်
Martingale ကော်လာ - အားလုံးသောအရွယ်အစား
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိသော leash များ - ၁ လက်မသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်
lids နှင့်အတူသိုလှောင် bins
Ziplock အိတ်များ - အသားညှပ်ပေါင်မုန့်၊
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လှူဒါန်းမှုများအတွက်သင်၏ဓာတ်ပုံနှင့်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် (အမည်များ) ကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပို့ပါ taraque@hodges.edu.
Teresa Araque ကိုဆက်သွယ်ပါ
ခေါ်ဆိုမှု: (239) 598-6274
4501 ကိုလိုနီ Blvd. , Ft ။ Myers, FL 33966
Tags: လှူဒါန်းခြင်း Drive ကို, HodgesU, ဝေးဝေးဝေးဝေးဝေးဝေးနေပါ